မျက်နှာပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အရေးက ထင်သလောက် မလွယ်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်ဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်လေ။ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ မှန်မှန်သစ်မယ်ဆိုတာလောက်နဲ့မရဘဲ ကံမကောင်းရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကုသမှု ခံယူရတဲ့အထိတောင်ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဆားဝက်ခြံဆိုတာ အရေပြားပေါ်က အပေါက်လေးတွေမှာ တစ်ခုခုပိတ်ဆို့ပြီး အြ...
Skin 79 Seoul Girl’s Beauty Secret Mask ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေ၊ မဲညစ်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေ၊ မျက်နှာကို ဖြူစင်ဝင်းမွတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးအဆင်ပြေသင့်လျော်တဲ့ Mask လေးပါ။ ထူးခြားတဲ့အားသာချက်တွေက - မျက်နှာကို ရေဓာတ်အပြည့်ဝပေးပြီး ဖြူစင်တောက်ပစေတဲ့ Brightening Care ပါဝင်ခြင်း...
မိန်းမသားဆန်တယ်... လှပတယ်... ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့ ဆံနွယ်ခွေခွေလေးတွေနဲ့ အလှတရားတွေကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်... Elegant Waves Girly Waves Cute Waves Sexy Waves Model - Nay Chi Shoon Lak Makeup & Hair - Omega Mee Mee (Beautyvine) Photo & Retouch - Thein Zaw Win (Photo Magic)
Colud Wild Rainbow Rain Model - July Makeup & Hair - Omega Mee Mee Photo & Retouch - Thein Zaw Win (Photo Magic)
မြန်မာ People မဂ္ဂဇင်းရဲ့ Makeup Artist's Creations ကဏ္ဍမှာ နာမည်ကျော် ဝါရင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ် ကိုမာရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုလေးတွေကို ရှုစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ယခု People ရဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ ဦးမာက မြန်မာသတို့သမီးနဲ့ အနောက်တိုင်းသတို့သမီးပုံစံ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြသပေးဖို့အတွက် ရွေးချ...